Soomaaliyad Maamule ka noqotay Goob Caafimaad Oo Mareykanka caan ka ah - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Soomaaliyad Maamule ka noqotay Goob Caafimaad Oo Mareykanka caan ka ah
Seattle, US- (ANN)-Dr Anisa Ibraahim oo qoxootinimo dalka Mareykanka ku tagtay ayaa hadda agaasime ka noqotay xaruun caafimaad oo carruurnimadeedi lagu daweyn jiray oo ku taallo Seattle ee carriga Mareykanka.
Warbixintan oo lagu shaaciya CNN, ayaa sheegeysa inay Anisa iyo qoyskeeda ay Soomaaliya kasoo qaxeen 1992, iyada oo carruurnimadeedi wakhti ku soo qaadatay xera qoxooti oo ku taalla Kenya.
“Waxaa jiray dad aad u badan oo meel kooban ku wada nool annaga oo dhammaanteen kasoo cararnay saameynta colaadaha iyo dagganaasha la’aanta siyaasadeed,” ayey tidhi Anisa oo 32 jir ah oo u warrameysay CNN. “Qoyska annaga nasiib ayuu leeyahay, waxaa jira saboolnimo aad u ba’an, nafaqa la’aan iyo cudurrada faafa iyo cudurrada dillaaca.”
Kaddib qoyska Anisa waxay aadeen dalka Mareykanka xilli ay da’da carruurnimada ku jirtay, iyada oo ay wehliso walaasheed ka yar oo cudurka jadeecada looga daweeyey dhakhtarka carruurta ee Harborview ee ku taallo Seattle.
Waa isla xarunti halka ay maanta maamula ka tahay Anisa iyada oo labaatan sano ka badan kasoo wareegtay, xilli ay dib u dejinta loo sameeyo dadka qoxootiga ah ay cadaadis ku hayso aqalka cad. Welina waxay si gaar ah u daryeeshaa carruurta qoxootiga maadaamaa ay yaraanteedi waddadaasi ay soo martay.
“Anigu ma ihi qof dadka caadiga ah ka duwan,” ayey tidhi Anisa. “Waxaa wakhti xaadirkan jira malaayiin qoxooti ah oo aan la siin fursadda aniga la i siiyey. Balse haddii ay fursado heli lahaayen waxyaabo la yaab leh sameyn lahaa.”
Dhakhtarkeeda wuxuu ahaa mid riyadeeda inay rumeyso ku dhiirrageliyo
Anisa Ibrahim waxay marwaliba jecleyd inay dhakhtar noqoto. Marka wakhtiga ay xaruunta caafimaadka ku qaadatay ayaa u suurageliyey riyadeedii si weliba la yaab leh. Daryeelka caafimaad ee loo fidiyey marki ay qoxootiga ahaydna, uu go’aankeedi beddelay, ayna sabab u noqotay “iney ku sii adkeysato” go’aankeeda.
“Dhakhtarka yaraantaydii igu daweynayey Harborview ayaa ka mid ah dadka igu horreeya ee i aaminay inaan dhakhtar noqon kara, ayey tidhi Dr Anisa. “Aniga ka dhalinyaro qoxooti ahaan waxay tidhi riyadeyda, aan damacsanaa inaan arko qof ku shaqeynaya ayaa micna badan ii sameyneysay.”
Dhakhtarkeyga waa Dr Elinor Graham, oo Profisoor ka ah jaamacadda Washington takhasuskiisuna yahay dhakhtarka carruurta.
“Inta aan xarunta caafimaadka ku suganaa carruurta waxaan marwalba weydiiyaa marka ay weynaadaan waxa ay doonayaan inay noqdaan, maxay tahay riyadaada? Waxaan xusuustaa Anisa oo ay da’deedu xilligaa ahayd 10 jir, waxayna igu odhan jirtay waxaan doonayaa inaan noqdo dhakhtarka carruurta sideyda oo kale,” ayuu yidhi Graham oo CNN u warramay.
Kaddib, marki ay Anisa ka qalin jabisay kulliyadda caafimaadka jamacadda Washington, Dr Anisa waxay 2016-kii ku biirtay Harborview iyada oo dhakhtarka guud ee carruurta ah. Bishi September-na waxaa loo dallaacsiiyey maamulaha xaruntaa.
“Waxaan dareensanahay in Dr Anisa Ibrahim agaasime ka noqotay, isla xarunti aan anigu ka ahaa dhakhtarka caruurta, isla-doorki aan ku lahaana ay ka qabato shaqadi aan caafimaadka aniga ka hayey,” ayuu yidhi Graham isaga oo Anisa ugu yeedhay maamule wanaagsan oo u adeegeysa dadka soo galootiga uu dakhligiisu hooseeyo, dadka qoxootiga iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay.
Waxay la dagaallami jirtay aragtida khaldan ee laga qabo dadka qaxootiga ah
Dr Anisa safarkeedii ay ku tagtay mareykanka ma ahayn mid caqabad la’aan ah.
Anisa oo curadka qoyskeeda ah ayaa noqotay gabadhi ugu horreysay oo wax ka barata Mareykanka, waxayna gabdhan yar ay bulshada ay ku dhex nooleyd kala kulantay cadaadis xooggan si ay ula qabsato nidaam iyo hab noolaleed ay horay u aqoon oo ku cusub, ayey tidhi.
“Caalam aadan aqoon inuu gudaha u gasho dhibkeeda ayey leedahay,” ayey tidhi Anisa. ”
Anisa waxay ka timid dhaqan adag oo ay bulshada Soomaalida leedahay, caqabadaha ay bulshada kala kulanto ayaana ka mid ah waxyaabaha ay u soo dhabar adeegtay, ayey tidhi Dr Anisa.
Hadda waxay Dr Anisa haysataa laba gabdhood ilmihii seddexaadna waddada ayuu ku soo jiraa, Anisa muhiimad gaar ah ayey u leedahay si la mid ah waaliddin badan ay waxbadan u hurto hooyanimada iyo caafimaadka iyo caafimaadka iyo hooyanimada.” Dad badan oo bulshada ka mid ah ayaa caawiya iyaduna sida oo kale bulshada ayey caawisaa.,
Haddaba, maanta Dr Anisa waxay maamula ka tahay xarun caafimaad oo ku taala Seattle, waxayna daryeeshaa bukaanka gaar ahaanna kuwooda qoxootiga iyo soo galootiga isugu jira oo dhawaan dib u dejinta looga sameeyey Seattle.
Waxay sida oo kale ka shaqeyneysa sidi ay xaaladdooda caafimaad ay wax uga baddali lahayd carruur uu xaalkoodu yahay midki ay Anisa ku sugneed 26 ka hor, iyaada oo rajeyneysa inay la dagaallanto aragtiyada khaldan ee laga qabo qoxootiga ku sugan gudaha dalka Mareykanka.